जीवन डाँगी रोल्पा । जुनसुकै चुनावमा पनि रोल्पा सधैँ चर्चाको शिखरमा हुन्छ । यो पटक वाम गगठबन्धन बनेपछि पनि रोल्पाको चर्चा घटेको छैन, अझ चुलिएको छ । वाम गठबन्धनबाट माओावादी
यसरी हुँदैछ दार्चुलामा चुनावी प्रतिस्पर्धा, वाम बलियो कि कांग्रेस ?
लोकेन्द्र प्रशाद जोशी दार्चुला । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा यहाँका राजनीतिक दलहरुले प्रचारप्रसारलााई तीब्र बनाएका छन् । चुनावी प्रचारसँगै कुन क्षेत्रमा कति मत आउँछ भन्ने कुराको अंकगणितीय खेल पनि दलहरुले
डोटीमा मन्त्री र पूर्वसांसदबीच कडा प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?
रोजेन्द्र जोशी डोटी । आगामी मंसिर २१ गते गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एक क्षेत्र रहेको डोटीमा केन्द्रीय सभाका लागि मन्त्री र निवर्तमान सांसदबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने
नाबालक छोराको जीवन बचाइदिन गुहार माग्दै बिरामी आमा
रोजेन्द्र जोशी डेटी । लामो समयदेखि एचआईभीबाट संक्रमित डोटीको पुर्वीचौकी गाँउपालिका–६ गाँजरी बासकोट निवासी चनरी भण्डारी छोराको जीवन बचाउन गुहार माग्दै गाँउ–गाँउ धाउन बाध्य भएकी छन् । भारतमा चौकीदारीको काम
भारतविरुद्ध चम्केका नेपाली हिरोहरू (फोटो फिचर)
काठमाडौँ । नेपाल युवा क्रिकेटरको टोलीले विश्व विजेता टेस्ट मान्यता प्राप्त बलियो टोली भारतमाथि ऐतिहासिक जीत निकाल्न सफल भएका छन् । एसीसी यू–१९ क्रिकेट अन्तरगत समूह चरणको पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग
भारतविरुद्धको जीतका नायक दीपेन्द्रसिंह ऐरी, यस्तो छ क्रिकेट यात्रा
काठमाडौँ । क्रिकेटको ‘वादशाह’ भारतमाथि इतिहासमै पहिलो जीत निकाल्ने क्रममा कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी नायक बनेका छन् । अलराउन्डर प्रदर्शन गरेका दीपेन्द्रको प्रेरणामा नेपालले मलेसियामा जारी एसीसी यू–१९ क्रिकेट प्रतियोगिताको
ज्ञानेन्द्र खड्का काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको ९१ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट निष्ठावान राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित थिए । ज्ञानेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएका विष्ट
पम्फा भुसालः पहिले निर्वाचन बहिष्कार, अहिले मतदाताको घर–घर
चमिना भट्टराई काठमाडौँ । मंसिर २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभाको निर्वाचनमा उम्मेदवाहरु घरदैलोमा व्यस्त छन् । ललितपुर–३ मा वामगठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल शनिबार बिहान
यसरी बन्दैछ रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन
अनिल तिवारी बारा । सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको वर्षौँपछि रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणकार्य अगाडि बढेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिने प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइन
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा, प्रकाशमान भन्दा रवीन्द्र मजबुत !
काठमाडौँ । मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ को नतिजाबारे अहिलेबाटै अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । यस क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता